UMATSHINI WEDISNEY WOKUBUYISA KWAKHONA UFUNA UKUBUYELA KWAKHONA KWICALULDRON EMNYAMA - IINCWADI
Yiwa Ngaphandle Nkwenkwe
I-Disney's Remake Machine Iimfuno zokuVavanya kwakhona i-Black Cauldron
Umatshini wokuphinda enze iDisney uyajikeleza, kodwa ayisiyonto ilula ukuthi baqalile ukuphelelwa zizinto ukuze baphinde babuye. Nje ukuba isenzo siphile Mermaid encinci iphumile, baya kuyilungisa yonke i-Disney Renaissance, ndingasathethi ke ngodidi oludala olunjengolo ICinderella, Incwadi yeJungle , kunye Ubuhle bolele . Mulan isendleleni eya kwiindawo zemiboniso, kwaye Inenekazi kunye neTramp uza kwiDisney +. Inkomo yemali iyadinwa kangangokuba kukho intetho yokuqalisa kwakhona Umcuphi omkhulu weMpuku .
Kodwa endaweni yokubuyela kwimovie eyayintle kakhulu, mhlawumbi iDisney kufuneka ibuyele kwindawo yokusilela kwayo okukhulu-kwaye uzame kwakhona. Lixesha lokuba uphinde uhlolisise ICauldron emnyama kwaye IziKronike zaseBritane.
spock kunye nekirk othandweni
Kungenzeka ukuba awuzange uve ICauldron emnyama . Ngenye yeemovie ezithandwa nguDisney ukwenza ngathi azikho. Ikhutshwe ngo-1985 kwaye ayifumaneki kwaphela kwividiyo kude kube ngaphezulu kweminyaka elishumi kamva, ifilimu iyaduma ngezinto zayo ezimnyama kunye nenyani yokuba umphathi osandula ukufakwa weDisney ngelo xesha uJeffrey Katzenberg wayefuna ukusikwa kakhulu kwasekuqaleni. Ngaphandle kwalawo maqhekeza, ifilimu yayiyi-flop kwaye imele i-nadir ye-Disney yobudala obumnyama obungapheliyo Intombazana encinci.
Ngaphandle kwendawo yayo edumileyo kwimbali yeDisney, ICauldron emnyama isenabalandeli, kodwa baninzi kakhulu abaxhasi bemithombo yayo, uLloyd Alexander's IziKronike zaseBritane . Ndizibala phakathi kweqela lesibini. Inkqubo ye- IBritani Iincwadi zaziloluhlu lokuqala lwamaphupha endazityayo ndisengumntwana, kodwa ndandingazi de kube yiminyaka kamva ukuba ulungelelwaniso lwefilimu lwalukhona. Khawufane ucinge ukuphoxeka kwam xa umboniso bhanyabhanya woluhlu lwam endiluthandayo luye lwangabi ziigusha ezimnyama zekhathalogu yeDisney, kodwa kunye nokungcangcazeliswa okungathandekiyo kwamabali endenze ndathanda ubumnandi kwasekuqaleni.
Ke kutheni iDisney kufuneka ibuyele equleni-er, cauldron? Kungenxa yokuba IBritani uthotho ngokwenene mkhulu. Ngokusekwe kwiintsomi zamandulo zase-Welsh (ezichaza inani elincomekayo loonobumba kumagama amaninzi), iincwadi zika-Alexander zilandela ezokufika kukaTaran, umncedisi womgcini weehagu kunye nomphefumlo ongazolanga, kunye nabahlobo kunye neentshaba aziqokelelayo njengoko uPrydain ejongene nesoyikiso sokufa kuka-Arawn -Nkosi (cinga ukuba uSauron udibana neVoldemort). Kukho ihagu yengqondo, inkosazana e-plucky, ibard eleleyo, ukumkanikazi okhohlakeleyo, kunye nento engaqhelekanga, enoboya ebizwa ngokuba yiGurgi. Yinto eqhelekileyo ekhethiweyo, kodwa igcwele ukwakhiwa kwehlabathi okutyebileyo, abalinganiswa abakhulu, kunye nokuzonwabisa okuchulumancisayo.
I-Disney isenokuba sele ikuloliwe. Emuva ngo-2016, kwabhengezwa ukuba imovie yePrydain entsha (okanye iimovie) yayisephuhlisweni. Ukusukela oko kubhengezwa, asikaze sive nto malunga neprojekthi, kodwa mhlawumbi iyintsikelelo, kuba iPrydain inkulu kakhulu kwifilimu enye okanye nakwifranchise, kodwa ilungele umabonwakude-kwaye iDisney + inokuba yindawo efanelekileyo.
Ukuba ulungelelwaniso lwefilimu olungaphumelelanga ICauldron emnyama isifundise nantoni na malunga nokufumana eli bali kwiscreen, kukuba ayisebenzi njengemovie. Ifilimu ibumbene ngokudibeneyo kwiincwadi ezimbini zePrydain: Incwadi yesiThathu kwaye ICauldron emnyama , kwaye ngokwenza njalo baphulukana nabalinganiswa kunye nobunzulu beencwadi. Isisombululo, ewe, asiyiyo enye into eqhekezayo kwi-franchise ye-movie, kodwa uluhlu olupheleleyo olusebenzayo.
Uhlaselo lwee-clones meme
ICauldron emnyama ngumgqatswa ogqibeleleyo ukuba iDisney ifuna ukusebenzisa into kwikhathalogu yabo yiyo hayi Ukumangaliswa okanye Idabi leenkwenkwezi. Sonke sikuposi- Imidlalo yeethrone umhlaba ngoku, kwaye IBritani Ingayinto entle neflegi yeflegi yeDisney + -ingakumbi kuba inendawo kunye nobunzulu beWesteros ngokuhlaselwa ngokwesondo. Ndingacinga uthotho lwefilimu phakathi kweendawo ezintle ezifanayo, okanye mhlawumbi eWales uqobo, kwaye amathuba anomdla. Kwaye iDisney + ngokuqinisekileyo iya kuba nakho ukufikelela kwiziphumo eziphezulu ezibonakalayo ezifunekayo ukuyikhupha.
Oku akuyi kuba sisihlandlo sokuqala ukuba ulungelelwaniso lwencwadi olungaphumelelanga luzanywe kwakhona kwiscreen esincinci. Intsapho yakwaDisney, ngeFreeform, sele iyenzile nayo Izixhobo zoMzimba, a.k.a. Shadowhunters , Kwaye kungekudala, siza kubona Izinto zakhe eziMnyama kwi-HBO ngaphandle kokungaphumeleli kwe ICompass yeGolide njengefilimu. Uthotho lukamabonakude lubonakala njengeyona ndlela ilungileyo yokutshintsha ubuchule bentsomi ngokubanzi, kuba ziyasivumela ukuba siphonononge abalinganiswa kunye nehlabathi. Zininzi izinto ezintle ezithandwayo phaya, kwaye ngakumbi uthotho olunethemba lokuxabiseka kunye nesibindi sabantu abancinci yinto esihlala siyifuna ngakumbi.
waluigi kwii-super smash bros
Ukutsala okungabonakaliyo kweWandaVision kwindawo yeTwilight
Njani i-Peach Girl's Sae Kashiwagi ilawulwe ukuba ibe yenye yezona Baddies zibalaseleyo
Amathoyizi R kuthi uBoniso loRhwebo loBawo kunye neNtombi yokuDibana kwiiMfazwe zeNkanyezi
Ibhotolo ikhutshiwe ngaphezulu kwesonka esininzi kakhulu: I-Hobbit ngoku yi-Trilogy
Ngaba iMonster Factory yeyona thotho ilungileyo kwiYouTube?
I-Wikipedia inoluhlu lweZintlu, eziLuhlu lwazo kunye noLuhlu oluhlukileyo loLuhlu
Ngaba le yiGundam eyiNene?!
Kutheni le nto bevuselele uMsebenzi wobugcisa oyiPokémon: Umboniso bhanyabhanya wokuqala ngeCGI?
Ixesha loluntu 5 isiqendu 8
amagorha amatsha e-york ubomi benene
is chirrut enye force sensitive
hark iponyoni etyebileyo
Iintsuku ezingama-500 zetam yehlobo